Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Chelsea Iyo Leicester City, Xidigaha Blues Oo Dib U Helay Qaab Ciyaareedkoodii Fiicnaa Ee Foxes Oo Hoos U Socota | CeelSheekh News
Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Chelsea Iyo Leicester City, Xidigaha Blues Oo Dib U Helay Qaab Ciyaareedkoodii Fiicnaa Ee Foxes Oo Hoos U Socota
Chelsea ayaa guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Leicester City iyada oo Diego Costa uu goolkiisii todobaad ee Premier Leaque-ga uu ka dhaliyay kooxda Foxes. Eden Hazard iyo Victor Moses ayaa min hal gool raacsaday taas oo keentay in Blues ay gaadhay guul xili ciyaareedkeeda aad muhiim ugu ah.
Eden Hazard iyo Diego Costa ayaa markii ay goolasha dhaliyeen u hibeeyay xidiga kooxdooda ee ay hooyadii geeriyootay ee Willian waxayna guushan Chelsea ka caawisay in ay kalsooni buuxda sii hesho ka hor kulanka ay Manchester United la ciyaari doonto.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qiimaynta ciyaartoyda kooxaha Chelsea iyo Leicester ee kulankii Stamford Bridge halkan ayaaanad kaga bogan kartaa.
Courtois – 6: Markasta oo loo baahdo diyaar ayuu ahaa laakiin weerarka Leicester City ayaan dhibaato badan ku abuurin wuxuuna qaatay kulan sahlan. Waxa uu garoonka ka baxay isaga oo aan wax gool ah laga dhalin.
Azpilicueta – 8: Waxa uu soo badhigay qaab ciyaareed fiican isaga oo markasta oo booskiisa laga ciyaarayo isku muujinayay.
David Luiz – 7: Waxa uu birta ku garaacay kubbad laaga xorta ahayd wuxuuna ugu dhawaaday in uu gool dhaliyo laakiin shaqadiisa difaac ayuu ka soo baxay isaga oo aamusiiyay weerarka Foxes.
Gary Cahill – 7: Waxa uu u muuqday mid ku raaxaysanaya shaxda saddexda difaaca ee Conte, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed fiican oo uu ku ilaawi karo kulankii Arsenal.
Vicor Moses – 7: Waxa uu dhaliyay goolkiisii labaad ee xili ciyaareedkan wuxuuna kubbad qurux badan la ciyaaray Chalobah wuxuuna ciyaarta u diray hurdada. Wuxuuna sii xaqiijisatay booskiisa joogtada ah ee uu dhawaan dib u helay.
Matic – 7: Waxa uu dib u helay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa kadib burburikii xili ciyaareedkii hore ka soo gaadhay qaab ciyaareedkii xumaa ee kooxdiisa. Waxa uu kubbad cajiib ah bixiyay goolkii labaad ee Blues.
Kante – 9: Waxa uu soo badhigay mid ka mid ah qaab ciyaareedkiisii xusuusta lahaa ee uu Leicester City kaga caawiyay koobka horyaalka xili ciyaareedkii hore. Waxa uu muujiyay awooda uu u leeyahay khadka dhexe isaga oo kala dhantaalay kooxdiisii hore ee Foxes. Kante ayaa ahaa xidigii ugu badhiga fiicnaa ee ugu qiimayta sareeyay kulankan.